La heli karo Qorfaha 1.3 | Laga soo bilaabo Linux
Waxaa hadda lagu dhawaaqay bogga rasmiga ah ee Qoraxda sii deynta nooca 1.3 ee tan ugu fiican deegaanka desktop, ama halkii, aad u fiican Shell waayo, Gnome.
Bilowgii hore horumarintu waa khuseysaa. Hadda xubin walboo muhiim ah waa a qalab waana ku dhaqaaqi karnaa si fudud innagoo jiir ku jiidaya, meel kasta oo aan rabno.
El Maareeyaha qaabeynta de Qoraxda wuxuu noo keenayaa tan astaamo iyo ikhtiyaarro cusub. Hadda waxaa loo isticmaali karaa in lagu habeeyo font, windows, icons desktop, cursor, Gtk themes .. Qeexitaankeeda garaafka ah ayaa sidoo kale is beddelay, si loo awoodo in la soo bandhigo macluumaad dheeri ah iyada oo aan la adeegsanin meelo badan shaashadda.
Liistada ayaa heshay hagaajinta soo socota:
Cabirka kafiican astaamaha.
Cabir menu oo go'an marka tirada kuwa ugu cadcad ay sarreeyaan.
Natiijooyin raadin dhammaystiran
Ikhtiyaarrada kale ee ku saabsan xaaladda meeniska markaan ku dul soconno.
Waxaas oo dhan waxaa u dheer, muuqaalka muuqaalka ayaa la hagaajiyay, dhowr qalad oo jirana waa la saxay. Dhammaan horumarkan iyo xitaa casharro lagu maareeyo tufaaxa ayaa lagu arki karaa xidhiidhkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Waxaa laga heli karaa Qorfe 1.3
Mar labaad ayaan isku dayi doonaa qaybtaan cusub maxaa yeelay 1.2 waxaan u adeegsaday xoogaa inaan ku tijaabiyo, laakiin waxaan ku dhammaaday inaan dib ugu laabto gacaliyahaygii XFCE (waxaan haystaa waqti adag oo aan ku sii daayo markii aan dareemo raaxo).
Maaddaama ay u oggolaaneyso dhaqaajinta walxaha ku dhex jira baarka, waa qodob aan runtii u baahanahay.
horay loo cusbooneysiiyay LM?
Uma maleynayo sidaas oo waxaan sugayaa inay tahay wax fiican, si aan ugu rakibo Debian-kayga 😀
Anigu kuma lihi Gnome iyo wax ka yar tijaabooyin, laakiin waxay i siinayaan xoogaa rabitaan ah.
Adigu ma ii sheegtaa Hadda waa inaan ku kala wareegaa Xfce iyo Cinnamon 😀
Iyaga kugula talin maayo .. Waxaan isticmaalaa linuxmint actalice oo xirmada cusbooneysiinta waxyaabo yar oo "nVIDIA" ah ayaa lagala soo baxaa sida ugu dhow 70 MB. Uma isticmaalo nVIDIA kaarka sawirada laakiin sim si kastaba ha noqotee waxaan u siiyay si aan u soo dejiyo maadaama xirmooyinkaas aan lahayn qorfe 1.3 ma bilaabmayo .. natiijadu waxay ahayd qolof hiddo-wadaha caadiga ah oo aan saameyn lahayn oo laga naxo Waxaan ku laaban waayey qolofta Gnome ee lint mint .. I ka akhri Madasha qaar xalka taas waa iyada oo la tirtiro baakadahaas markii la soo dejiyo ¬ ¬ waxay ila tahay aniga marar badan inaanan bixin wax natiijo ah .. dib ugu noqo gacaliyahaygii ubuntu .. midnimadu waxay noqon kartaa wax waalan laakiin waxyaalaha sida kuwa aan kor ku xusan weligeed ma dhici doonto. Qorfe weli waa mid aad u da 'yar .. waa inaan sii wadnaa waqti siinta .. Waan ogahay inay noqon doonto qarax iyo koboc ku yimaada dunida Linux waqtiga ugu habboon .. la soco faahfaahinta si ay u hagaajin karaan qorfe haddii ay dhacdo way jabtaa http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=208&t=94846&p=543231&hilit=cinnamon#p543231
Taasi aniga si sax ah ayey igu dhacday, wixii aan sameeyayna waxay ahayd in meesha laga saaro xirmada nvidia taasna waan ku xaliyay wax walbo, laakiin waxa aanan jeclayn ayaa ah in tufaafayaasha furaha ah aan loo dhaqaajin karin sida tufaaxa liiska daaqadaha oo ay is dul saaran yihiin dhammaan tufaaxyada kale. , Waxay noqotay inaan dib ugu laabto qolofta gnome
Sidaas oo kale! Aad ayaan uga niyad jabsanahay qaybtaan 1.3 .. Waxaan kusoo laabtay Midnimada! Waqti baan siin doonaa ilaa ay ka yara bislaadaan! Waan ogahay in qorfe uu leeyahay mustaqbal, qaladku wuxuu ahaa in dhamaan astaamaha gudiga loo badalo tufaax (waa aragtidayda) waxaan u malaynayaa inay ahayd meeshii ay ku qaldameen .. aan aragno meesha sheekadu ina gaynayso. qorfe duulimaad tartiib tartiib ah ayuu u socdaa 😀
Wixii nacas ah oo sidan oo kale ah ayaad u beddelaysaa distro ..., relol.
Ama waa maxay ubuntoso
Ma dhihin in la badalo distro-ga aan isticmaalayay qorfaha intii aan ku sugnaa Ubuntu
waxaan isticmaalaa linuxmint
dib ugu noqo gacaliyahaygii ubuntu
dib ugu noqo gacaliyahaygii ubuntu .. midnimadu waxay noqon kartaa wax waalan laakiin waxyaabo sida kuwa aan soo sheegay waligood dhici maayaan
Aaaay maxaa kaaga tagay inaad barato ...
Dad badan oo isticmaala barta Cinnamon waxay ka codsanayaan Clem intaas uun, si looga saaro ku tiirsanaanta "loo baahan yahay" xirmooyinka NVidia. Waxaan u maleynayaa inay dhowaan ku siin doonaan xal arrintan.
Xaq !! waa waxa aan ku sheegay bilawgii faalladayda koowaad .. Waxaan sugi doonaa inay saxaan taas ka dibna ay sii wadaan adeegsiga qorfe .. Weli ma fahmin sababta ay ragga meesha jooga igu yiraahdaan "waxaad u baahan tahay inaad barato" marka hadaad isticmaasho ubuntu mid Ma jaahilbaa mise distoorkaaga ayaa kaa dhigi kara wtf caqli badan? waxa ay ku hadlayaan waa waxyaabo waalan oo saafi ah .. qofku wuxuu adeegsadaa harti haday ka soo baxdo wixii laga filaayay, hadii ay qabato shaqadii uu u baahnaa, hadii ay keento natiijo wanaagsan, iyo hadii uu qofku dareemo raaxo
Marka hadaad isticmaasho ubuntu waa jaahil
Maya (marka laga reebo ubuntosos), laakiin in la yiraahdo Midnimo khaladaad malaha waa jahli, ama xitaa Ubuntu, maxaa yeelay waxay leedahay khaladaad ka badan inta aan ogahay.
Hagaag, adiga ayey unoqon doontaa inaad qaladaad kahesho maxaa yeelay ma sameeyo 😉
Xaqiiqdii, way soo baxeen, laakiin keligay ma ahi.
Mana aha hada cayayaanka, dadka intiisa badan ee tijaabiya qashinqubka kale waxay ogaadaan xasilooni dheeri ah
distro kale oo la mid ah taas ?? ha ii sheegin in Linux mint ¬¬ xq ay yihiin isla ubuntu laakiin midnimo la'aan
Anigu iskuma dayin, markaa anigu kama hadli doono
ahh waan ogahay inaad ka timid fedora 😉 hehehe ..
Hagaag maya, waxaan ka imid sii deynta KISS
Tijaabada Debian ??
Arch iyo Gentoo, kiiskeyga Arch oo ah midka aan ilaa hadda isticmaalayay
mmm iyo broder hambalyo wanaagsan .. waxbadan kama aqaano meelahaas .. waxaan kaliya u isticmaalaa waxyaabaha laga soo qaatay debian ee .deb iyo xq waa tan aan isticmaalo ilaa hada. Arch waxaa loogu talagalay dadka adadag ee jecel inay gacan badan nidaamka into Waxaan ahay uun isticmaale dhexdhexaad ah
Hagaag, waxaan kaa raali galinayaa inaad tahay jaahil, maxaa yeelay waxaan arkay dad badan oo ku tuuraya shiid Midnimada waana sababtaas sababta aan aniguba u xukumay, marka laga reebo xaqiiqda ah inaanan jeclayn in la koobiyo
In la yiraahdo qaladaad ma jiraan waa khiyaano weyn, maxaa yeelay markaa dad badan oo adeegsada Windows waxay kuu sheegi karaan inaysan weligood arkin fayras ama shaashad buluug ah, laakiin aysan arkin, macnaheedu maahan in dadka caadiga ahi aysan lahayn weligood ma dhicin. Aniga ahaan midnimada 3d, waxay i siisaa dhibaatooyin qarashka cpu, si aan u idhaahdo waxay ku bixisaa cpu badan (aan ka bad badnayn) daaqadaha 7, horay ayaan u iri dhamaantood, waxay igu haysaa 30% cpu (amd x2 turion) mar mar mar waxay gaaraysaa 60%, caro. 2d dhanka kale waxay kusii jirtaa 5 ama 6% laakiin waxaan la ildaran yahay saameyn jeexjeexa shaashadda oo ay weheliso.
Waxaan ka jeclahay avatar kan adiga ah better
pandev92 waad hore u ogayd, Canoni $ badanaa waxay ka soo baxday samaynta hargab waxayna sameysay shit muddo dheer.
Mana arag shaashadaha buluuga ah, laakiin waxaan arkay fayrasyada.
elav <° Linux salaan .. ma isticmaashaa baaritaanka debian?
Aad ayaan ula yaabay qorfe, aad baan ugu daalay "qolof" waxaanan doonayay inaan ku laabto miiska sidii caadiga ahayd. Waxa aanan fahmin waa waxqabadka cajiibka ah ee Linux Mint 12 (Cinnamon 1.2, wali lama cusbooneysiin), laptop-keygu wuxuu leeyahay muuqaallo Intel ah mana ahan wax laga qoro, laakiin waxay ku socotaa si fudud oo cajiib ah.
Waxaan rajaynayaa inay sidan ku sii socdaan, in mawduucyada cusub iyo wixii la mid ahi muuqdaan oo waxay noqon kartaa xulashada tixraaca ee kuwa raadinaya desktop-ka caadiga ah ee caadiga ah.
Ku jawaab Josemas
Waxaan kugula talinayaa inaadan u cusbooneysiinin nooca 1.3 hadaadan isticmaaleyn kaarka nVIDIA graphifa .. waxbadan sug in mudo ah ilaa iyo inta lint mintka lint ay hagaajinayaan cayayaanka qaar
Waxaan ku tijaabinayaa Fedora 16. Runtu waxay tahay inaan la yaabay sida ugu dhakhsaha badan ee noocaani u ahaa, way ka dhib yar tahay sidii aan isku dayay 1.2. Sida Gnome-Shell waxaad haysataa desktop aad u nadiif ah. Sidoo kale, waxaa jira wax aan doonayo inaan iraahdo, halkii aan ka qancin lahaa kuwii loo adeegsaday Gnome 2.x desktop, waxay ila tahay inay u janjeedhayaan kuwa loo bartay Win 7 iyo / ama XP.
Waxaan tijaabinayaa dejinta qaar ka mid ah, maadaama ay jiraan waxyaabo gaar ah oo aanan ka warqabin, tusaale ahaan badhanka midig ee jiirku wax saameyn ah kuma laha desktop-ka. Ma haysto heerkulka processor-ka ee baarka, iyo arrimo kale oo Gnome-Shell uu igu sii kordhiyo.
Waan arki doonaa waxa kale.
taasi waa run!! Rag qorfe waa in ay leeyihiin waxoogaa baashaal ah oo ay waqti fiican qaataan, Gnome Shell waa jawharad taaj 😉
Marnaba iskuma dayin fedora .. Waan ogahay in xitaa Linus Tolvards uu isticmaalo, waan jeclahay qolofta gnome, waxa aanan aqoon waa xirmooyinka Yun, sidoo kale ma aqaano hadii fedora ay jiraan codsiyo aan caadi ahaan u isticmaalo badanaa sida skype, jdowloaders, emese, sublime text2, audacity, gtkpod, vlc, etc and etc ... Waxaan sugayaa Debian inuu u wareego qolofta Gnome si uu i dhaafo.
Niman yahow salaanta meeriska ah 😉
Dabcan codsiyadaasi waa.
Yumna sidan ayaa loo isticmaalaa
Kaliya waa inaad bedesho Apt-get to Yum
Marka ma adeegsaneyso "sudo" ama "karti" .. tusaale ahaan waxay sameyn kartaa waxyaabaha soo socda:
yum -y cusbooneysiin
yum -y rakib vlc
Sax baan ahay ?? iga sax haddii loo baahdo
Sudo waa ikhtiyaari, looma awoodin asal ahaan
iyo sida keydadka iyo ppa, sidee fedora u shaqeysaa?
Sidee ku hadalnaa iyada oo loo marayo golaha?
In ka badan wax walba maxaa yeelay waxay nagu tuurayaan halkan haddii aan sii wadno qallooca.
Waxaan haynaa qaybta Fedora: http://foro.desdelinux.net/viewforum.php?id=3
ok ok raali ahow su'aalaha badan many
Nah, su'aashu ma ahan dhibaatada hahahahaha, way fiicantahay inay su'aalo jiraan, maxaa yeelay su'aal kasta waxaan marwalba isku dayi doonaa inaan jawaab ka bixino, waana taas mida naga dhigaysa xoogaa gaar ah, faahfaahinta ayaa ah in kiisaska sidan oo kale ah, si aaysan u qalloocin maqaalka, waxaa fiican in laga hadlo fagaaraha, taasi waa waxa loogu talagalay 😀
Waxaan rajeynayaa inaadan dhibsan ^ - ^
Weydiinta waxna ma dhacaan, laakiin way kafiican tahay goobta maxaa yeelay sifiican ayaad u sharixi kartaa naftaada
Ppa-ka waxaad illoobi doontaa, keydadka Fedora waxaa ku jira ficil ahaan dhammaan barnaamijyada aad waligaa ubaahan doonto, taas oo ah mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda weyn.
Mmm aad u fiican .. sidoo kale xitaa ma hubo haddii aan tallaabada qaado iyo in kale, xilligan la joogo waan ku faraxsanahay isticmaalka gnome shell ee Ubuntu 11.10, waxaan jeclaan lahaa inaan tago debian laakiin waxaa jira waxyaabo aad uga gaabiya imaanshahooda, iyo haddii aan isticmaalo tijaabinta waa inaan noolaado Xirmooyinka dillaaca iyo ECT ect ect iyo sidoo kale, runtii ma garanayo waxaan sameeyo: S
Xirmooyinka xirmooyinka? Ii aamin, waxaan isticmaalaa Tijaabada Debian mana aanan helin hal xirmo oo jaban.
Haddii aadan hubin inaad boodboodid iyo in kale, uma baahnid inaad walwaasho, waxaad si dhammaystiran uga rakibi kartaa fedora mashiinka kumbuyuutarka ah iskuday ama tijaabiso wax kasta oo aad rabto adigoon walwal qabin, ka dib isku dayga iyo intaas oo dhan haddii aad jeceshahay nidaamka , markaa waxaad sameyn kartaa boodboodka ugu dambeeya. aniga oo kale oo mararka qaarkood u isticmaala fedora wareejintiisa loo yaqaan "shaybaarka amniga", waxaan ku tijaabiyaa oo aan ku tijaabiyaa mishiinka meertada ah si aan wax u barto oo u baashaalo in yar.
ahahahahahaha .. Si fiican ayaan kuu fahmay Diego
Waxaan u maleynayaa inaadan dhibaato ku qabin codsiyada, waa AAD laakiin aad iyo aad ayey dhif u tahay in Debian (ama derivatives) ay jiraan codsi X iyo RPM distros ma jiraan not
Taasi waxay leedahay laba erey oo keliya:
Miyaanay mudnaanta ku-habboonantu u soconaynin Gnome Shell iyo Gnome 3? Waxaan u maleynayaa in qorfe ay ku tiirsan tahay tikniyoolajiyaddaas oo dhan… .. sidii ay ahayd ballaadhin. Asalkeedu wuxuu ahaa kordhin.